(Jan-2012)လက်သစ်ကဗျာ	Written by Administrator	Thursday, 05 January 2012 10:38	Share
ငါ့ကိုယ်ငါပဲ ပြောပါတယ်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ရည်ညွှန်းရအောင် အာရုံကမပြည့်စုံဘူး ပြောပါတယ်။antifungal medications free cialis samples. exual Dysfunction, SSRIGet emergency medical help if you have these signs of allergy: hives difficulty breathing swelling of the face, lips, tongue, or throat tadalafil tablets. argaiv1773
နေရာစုံက ဖြန့်ကြက်လာတဲ့ လှိုင်းတွေက ကူးစက်ရောဂါလို မြန်တယ် ပြောပါတယ်။အားလုံးကို တစ်သီးတည်းစားဖို့ ဒီခေတ်မှာ စိတ်မချရဘူးဆိုတာ ပြောပါတယ်။အထူးဆိုပေမယ့် နေရာတကာ သတိထားကြည့်ရင်ငွေရှိမှ ထူးမယ့်ဘ၀ ငါတို့က ဘာထူးမှာလဲ။ငါ့ကိုယ်ငါပဲ ပြောပါတယ်။ပေါက်မဲကို မျှော်ပြီး ကူပွန်တွေစောင့်ရှောက်ထားရအပိုဆုကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ညဉ့်နက်လာတာပဲ ပြောပါတယ်။တက်ကျမ်းများနဲ့ အနီးကပ်ဖြေရမယ့် ရက်အတွက် ပြင်ဆင်ရတာဆံပင်တွေ ဖြူလာတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။နောက်ဆုံးမှာငါ့ကိုယ်ငါပဲ ပြောပါတယ်။ ။
အမှားခြစ်ရာတွေနဲ့ လူကြည့်စမ်းသိသာ မြင်သာတဲ့ အတ္တတွေနဲ့ငါဟာ ဘယ်အထိ သက်ဆိုးရှည်ဦးမလဲနေ့ညတွေထဲအပြုအမူအမှားတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေ တစ်မိုင်နှစ်မိုင်စာမကပြုမူခဲ့မိရဲ့ဝမ်းနည်းစရာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ။အမြင့်က ခုန်ချလာတဲ့ စိတ်နဲ့ ရပ်တည်နေလို့ ရလာတဲ့ နောင်တတရားတွေထဲ ငါ့မျက်ရည်တွေ မိုးလိုရွာလို့စိမ်းလန်းနေတဲ့ ရှုခင်းတွေကို မမြင်တော့ဘူးအာသာငမ်းငမ်း တပ်မက်စိတ်နဲ့အပိုင်ရယူချင်တဲ့ လောဘများမခံချင်စိတ်နဲ့ တစ်ဟုန်ထိုးချွန်းလွတ်ဆင်လို ပြေးထွက်သွားတဲ့ ဒေါသများငါဟာ အမှောင်ထဲမှာ ဘောင်ကျွံခဲ့တဲ့ လူသား။ငါ့ အတောင်ပံခတ်သံတွေမှာအမှန်တရားတွေပဲ ဖလန်းဖလန်းထဖို့ငါ ဇွဲကြီးကြီး ဆုပ်ကိုင်ထားရမှာကစိတ်ကောင်းစေတနာတွေ စိုက်ဝင်နေတဲ့ ၀ိညာဉ်။အဲဒီ ၀ိညာဉ်ရေရှည်ရှင်သန်ဖို့စိတ်ရိုင်းတို့ကို ချွန်းအုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်ကိုယ်ကျင့်တရားကို အပိုင်ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ကြိုးစား ကောင်းမြတ်တဲ့ ၀ိညာဉ်အဖြစ် တင့်တယ်ဖို့အတွက်ပဏာမအဆင့် ကျင့်ကြံရမှာက ဖြူစင်နှလုံးသားနဲ့ မုဒိတာပွားရင်းအတ္တထူထူကို တဖြည်းဖြည်းခွာချအတ္တပါးပါးလေး ဖြစ်လာစေဖို့ပါ။ ။ မင်းထက်သားညီ၊တောင်ငူ၊
ရထားမစိုက်တဲ့ ဘူတာအကောင်အထည်ဒြပ်မဲ့လေးလံဝန်ပခုံးပေါ်တင်လို့အဆံ မရှိတဲ့ ခရုအိမ်မှာကြိမ်မီးအုံးသလို လောင်ကျွမ်းအလွမ်းပင်လေးတောင် မစိုက်အားဘူး။မြင်ရိုင်းတစ်ကောင်လိုဝုန်းဒိုင်းကြဲစီးဆင်းနေတဲ့ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက် မြစ်တစ်စင်းတောင်မှကမ်းပါးနှစ်ခုရဲ့ အထိန်းအကွပ်ကြားမှာဆန္ဒကို အလံထူလွှင့်ရင်းပင်လယ်ဝဆီ ခရီးပေါက်ခဲ့။ပစ္စုပ္ပန်သင်္ဘောကြီးကထွေပြားလွန်းတဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုမှာဆီးဖြူသီး ဆန်ကောထဲ လိမ့်သလိုသေချာမယ့် ပစ်မှတ်အကြိမ်ကြိမ်လွဲလို့လန်းဆတ်မှု အိပ်မက်တွေ ပုပ်သိုးတန်ဖိုးမဲ့ဆုလာဘ် ရင်မှာပိုက်ရင်းအစုန်အဆန်မဲ့ ဘူတာကြီးမှာအထီးကျန်အဖော်ကင်းလည်ပင်းဖက်မယ့် သူတွေမရှိခဲ့ဘူး။ ။ စန္ဒကူးနီ
ကျွန်မရဲ့ သူရဲကောင်းတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ နန်းတက်လှမ်းမယ်ဆိုတုန်းကပြုံးမြသွားတဲ့ အဖေ့မျက်နှာတစ်သက်စာ ရင်မှာမှတ်မိနေပါရဲ့။ဘာကြေးညာကြေးအခါခါပေးဖို့ တောင်းဆိုတော့ခေါင်းမော့လို့ လက်မထောင်ခါးကော့အောင် ကျူံးရုန်းရှာပြီးကြိုးစားဟဲ့ ငါ့သမီးပညာတတ်ကြီး ဖြစ်စေဖို့တဲ့တစ်ချက် မညည်းကြက်သီးများတောင် ထမိပါရဲ့။အဖေ “ကျောင်းမှာလေ” လို့ဖြစ်ရပ်တွေ စာဖွဲ့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့ ပြောရင်“ဟေ” ”ဟုတ်လား” “တဟားဟား”နဲ့သဘောတွေကျဗဟုသုတ ရသကွာလို့မကြာမကြာဆိုသကာလိုချိုတဲ့ အဖေ့အသံလေးပြန်တွေးမိတိုင်း မျက်ရည်ဝိုင်းရဲ့။တဖွဲဖွဲတက်မစဲဘဲ မရပ်တော့တဲ့“ကုန်ဈေးနှုန်း”အောက်မှာအိပ်မက်တွေ ကယောက်ကယက်ဆန္ဒတွေ ပျောက်မတတ် ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့်ချွေးစက်တွေ အများအပြားနဲ့မရပ်မနား ခရီးဆက်သမီးအတွက်ရယ်လို့ ရည်စူးပြီးခေတ်ကြီးရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကိုတိမ်ပေါ်ထုအထိ တက်ထိုင်တစ်ချက်မငိုင် ယှဉ်ပြိုင်ရဲပုံများရင်အစိုင်ထဲမှာအစဉ်ခိုင်မြဲစွာ ရှိလှပါရဲ့။သြော်-ကျွန်မရဲ့ အဖေဘ၀ရဲ့နွေထဲမှာ ကံကြမ်္မာရိုက်ချက်မည်သို့ပင် ခါးသက်ခဲ့လည်းမပျက်အပြုံးနဲ့တစ်သက်လုံး ရင်ဆိုင်ပြီးသမီးလက်ကို ကိုင်ဆွဲတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာ ၀င်ခဲ့တာအောင်ပွဲများစွာ ဆင်ခဲ့တာကိုနပိုလီယန်နဲ့ ဗန္ဓုလသူတို့က တမလွန်ကနေ ခဏလာပြီးအဖေ့ကို ဦးညွတ်ကြမယ်တဲ့လေအဖေ့ကို ဦးညွတ်ကြမယ်တဲ့။ ။
သစ္စာခင်(Teen မဂ္ဂဇင်း၊ ဇန်န၀ါရလ ၂၀၁၂)
We have 73 guests online	and views	© 2008-2010 Shweamyutay.com. All rights reserved.